दालभात खानलाई हामी कति खर्च गर्न तयार छौँ ? – HamroKatha
दालभात खानलाई हामी कति खर्च गर्न तयार छौँ ?
कमाएको पैसा खर्चका लागी छुट्याउँदा सम्भवत: पहिलो प्राथमिकता दालभातले नै पाउँछ
हाम्रो कथा २०७६ साउन १० गते १२:५०
दालभातको व्यापार खाना चल्छ भन्ने प्रमाण तपाई हाम्रो जिव्रोलाई चाहिने टेष्ट हो । हामी नेपाली जातैले भाते हौँ । अर्थात हामीलाई भात अधिक मनपर्छ । दिनमा २ चोटी भात खाने त हाम्रो रुटिन नै छ । त्यसैले राम्रो भात पसल सधै चल्छ । गर्ने नगर्ने हाम्रो खुशी । चल्ने नचल्ने हाम्रो व्यवस्थापनमा भर पर्ला । तर,निश्चित छ, राजधानीमा भात चल्छ ।
तस्बिर श्रोत : Nilko ब्लग
धुलिखेलमा रहेको छाप्रो होटलमा स्वादको अपार व्यापार छ । होटल संचालकको भनाईमा यहाँ हरेक दिन करिब ३ सय देखि ५ सयसम्म प्लेटसम्म खाना विक्री हुन्छ ।
तर, यसको व्यापार देख्ने, जान्ने र वुझ्नेहरु भने त्यत्तिमै सन्तुष्ट हुदैनन् र भन्छन्, यहाँ दिनमा ७ सयदेखि १ हजार प्लेटसम्म खाना विक्री हुनसक्छ । सादा खानाको १५०, चिकेन खानाको २०० र खसी मासु भएको खानाको मूल्य २५० रुपैया पर्छ । सरदरमा यहाँ एक प्लेट खानको मूल्य २०० रुपैया पर्छ भनेर मान्दा यहाँ हरेक दिन करिब १ लाख रुपैयाको खाना मात्र बिक्री हुनसक्छ ।
विशेष केही छैन् यहाँ । उही दाल भात तरकारी अचार र झोल हालेको मासु खसी र कुखुराको । बस् पाईने यत्ति हो । तरपनि खानामा भएको टेष्ट र ताजापनका कारण भात खानेहरुको ठूलै भिड लाग्छ, यहाँ । देशका वरिष्ठ कलाकार, पत्रकार, एनजिओकर्मीदेखि नेतासम्मको भिड लाग्छ ।
काठमाण्डौवाट धुलिखेल वजार पुग्नै लाग्दा दाहिने साईडमा छ । होटल छाप्रो । यसका संचालक हुन् ५० वर्षिय धन वहादुर तामाङ्ग । कुनैवेला टक चलाउथे धनवहादुर । उनले करिब ३० वर्ष टक चर्ला । तर, सधै अर्काको ट्रक चलाउन मन लागेन र आफैले यो होटल शुरु गरे । करिब २० वर्ष अघि ।
सानो छाप्रोबाट शुरु भएको होटल अहिले यत्रो भएको छ । सानो छाप्रोबाट शुरु भएका कारण होटलको नाम नै छाप्रो रहन गयो । तर, अहिले धेरै कुरा व्यवस्थित भएका छन् । राम्रो किचन छ । व्वस्थित खाना खाने ठाँउ छ । सबैभन्दा ठुलो कुरा उनका सबै छोरीछोरा सहित २२ जनाले काम पाएका छन् ।
तर, यो बिचमा धनबहादुरले कति धन चाँही कति कमाएछन् त? आह धन वहादुर मरि गए खुल्न मानेनन् । धन वहादुर । सानो स्वरमा कसैले सुन्ला की झै गरेर उनले भने के कमाउनु र? त्यही महिनामा १ डेढ लाख हुन्छ होला ।
धन बहादुरको यो कहानीबाट मुख्य ४ कुरा सिक्न सक्छौं ।
१. गरे हुँदो रहेछ ।
२. गर्नेहरु रहेछन् यहाँ ।
३. उद्यमशिलताले जीवनमा परिर्वतन ल्याउदो रहेछ ।
४. दिनमा ५/७ सय ग्राहकले सन्तुष्ट भएर खादाँ धन बहादुरले ठिक छ धन कमाएका छैनन नै भनेपनि धर्म चाहिं पक्कै कमाएका छन् है । किनकी कर्म नै धर्म हो ।
दाल भातको व्यापारको कुरा गर्दा थकाली भन्ने ब्राण्ड राजधानीमा गज्ज्वले विकीरहेको छ । र, यो ब्राण्ड किन्ने तपाई हामी नै हौ ।
भनिन्छ, राजधानीमा करिब ४ सयको हाराहारीमा थकाली भोजनालय छ । ति मध्ये अधिकाशं थकाली भान्साघरको दैनिक विक्री सरदरमा ५५ हजार रुपैयाको हाराहारीमा रहेको किग्स कलेजले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यो हिसाबले राजधानीमा दैनिक २ करोड २० लाख, मासिक ६६ करोड र वार्षिक करिब ८ अर्व रुपैयाको थकाली खाना विक्री हुन्छ ।
अब यसलाई अर्को तरिकाले हिसाव गरि हेरौ न त अनि वुझछ चित्त । राजधानीमा पाईने थकाली भान्साघर मूल्यका दृष्टिकोणले फरक फरक छन् कतै ३ सय रुपैयामै चिकेन खाना पाईन्छ त कतै त्यही चिकेन खानाको ६ सय रुपैया पर्छ । सरदरमा हामीले चिकेन खानाको मूल्य राख्यौ ३५० रुपैया । वार्षिक ८ अर्वको व्यापार हुन ३५० रुपैया मूल्यको दरले २ करोड २८ लाख प्लेट खाना विक्री हुनुपर्छ । यो भनेको मासिक करिब १९ लाख प्लेट खाना हो । यो हिसावले दैनिक ६३ हजार प्लेट थकाली खाना विक्री हुन्छ राजधानीमा । अघि नै भनियो, राजधानीमा ४०० वटा थकाली भान्साघर छन् । ६३ हजार प्लेट खाना ४०० वटा थकाली भान्साघरवाट विक्री हुँदा एउटावाट सरदरमा १५८ प्लेट खाना विक्री हुनु पर्छ । हो, सालाखाला हरेक थकाली भान्साघरवाट दैनिक करिब १५० प्लेट माथि खाना विक्री भईरहेको छ । अर्थात थकाली खानाको वार्षिक वजार ८ अर्व रुपैयाको छ । अझ् रमाईलो कुरा त यसको व्यवसायिक संभावना अझै ठूलो छ ।
राजधानीका विभिन्न थकाली होटलहरुमा गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार करिब १०० भन्दा धेरै थकाली होटेलहरु ४० लाख भन्दा बढीको लगानीमा खुलेका छन् । त्यसो त करोड भन्दा माथि लगानी गरेर नेपाली गाह्रकलाई आकर्सित गर्ने गरि खोलिएका थकालीहरु भान्साघरको संख्या नै राजधानीमा ३० वटा भन्दा धेरै छ ।
३०० देखि ३५० सम्मको मम्साहारी र २०० देखि २५० सम्मको साकाहारीमा सादा खाना बिक्रि गर्ने यस्ता थकली होटलहरुको सरदर दैनिक सेल्स अघि नै भनियो करिब ५५ हजार रुपैया भन्दा बढी छ । यसमा करिब २५ प्रतिसत भन्दा माथिको नेट मार्जिन छ । यो हिसावले साधारणतया एउटा थकाली भान्साघरले कम्तिमा दैनिक १३ हजार मासिक मासिक ४ लाख र वर्षिक ५० लाख रुपैयको हाराहरीमा कमाईरहेका छन् ।
भन्न खोजिएको कुरा राजधानीमा थकाली खाना वेच्ने व्यवसाय राम्ररी चलेको छ र राम्ररी गर्ने हो भने यसको संभावना अझै छ ।